कुन राशिले कुन काम गर्दा हुन्छ फलिफाप ? | सुदुरपश्चिम खबर
कुन राशिले कुन काम गर्दा हुन्छ फलिफाप ?
तपाईं कुनै विजिनेश सुरु गर्ने सोचिरहनुभएको छ ? वा सुरु गर्न गइरहनु भएको छ कि ? वा, कुन विषयमा प्रवेश गर्ने वा करिअर बनाउने भन्ने अलमलमा पो हुनुहुन्छ कि ?
यदि राशिलाई ध्यानमा राखेर पढाई, करिअर तथा व्यवसाय सुरु गर्ने हो भने सफल हुने संभावना बढी हुन्छ । कुन राशिलाई कस्तो पढाई, करिअर र व्यवसाय गर्नु उत्तम मानिन्छ, आउनुहोस् हेरौंः
गणित, साइन्स र कमर्स र अन्य सबै बिषय शुभ नै मानिन्छ । अत्यधिक सफलताका लागि पहेंलो कपडा लगाउने गर्नुहोस् र शिव भगवानको पूजा गर्नुहोस्। (नयाँ पुस्ता बाट सभार)
ओलीलाई माधवकुमार नेपाल पक्षको आग्रह : नाराबाजी रोक्नुस्, एकता प्रक्रिया अघि बढाउनुस्
बालुवाटारमा शेरबहादुर देउवा र विप्लवबीच भेटवार्ता